MAANHADAL: Maxaa hor taagan in Puntland uu ka hirgalo nidaamka Xisbiyada badan (dhegayso) – Radio Daljir
MAANHADAL: Maxaa hor taagan in Puntland uu ka hirgalo nidaamka Xisbiyada badan (dhegayso)
Diseembar 13, 2019 10:43 b 0
Barnaamijka Maanhadal iyo maanta waxaan ku saabsan yahay Sababta hor taagan in mudo 20sano ah Puntland laga hirgaliyo nidaamba Asxaabta badan, dadkuna ay ku soo doortaan shaqsiga ay rabaan doorasho qof iyo cod ah? yeyse tahay cida hortaagan? Ma dowladda mise Isimada soo xulaya baarlamaanka?
Waa mowduuca barnaamijka Maanhadal ee maanta, waxaan soojeedinaya wariye Maxamuud Cabdi Ibraahin oo Bosaaso ku sugan.
Yaa ku guulaystay doorashadii ka dhacday Britain? (Akhriso)